China BENZALKONIUM CHLORIDE mveliso kunye nabenzi | ICHEM-PHARM
I-DICHLOROMETHANE / I-METHYLENE C ...
I-Benzalkonium chloride yinto ebalulekileyo ye-cationic quaternary ammonium yetyuwa, esetyenziswa ngokubanzi kukhathalelo lomntu, ishampu, isixhobo sokupholisa kunye nezinye iimveliso. It has anti-static elungileyo, bhetyebhetye kunye nefuthe anti-umhlwa, kwaye kananjalo ingasetyenziswa inzala, ushicilelo kunye bokudaya abancedisi, ukuhlamba amalaphu kunye namanye amashishini.
Uvavanyo: 80% EINECS No. 205-351-5 I-Benzalkonium chloride1227 luhlobo lwe-cationic surfactant, eye-nonoxidizing boicide. I-Benzalkonium Chloride 1227 inokubamba ngokufanelekileyo ukusasazeka kwe-algae kunye nodaka. I-Benzalkonium Chloride 1227 ikwanazo neepropathi ezisasazekayo, inokungena kwaye isuse udaka kunye ne-algae, inezibonelelo zetyhefu ephantsi, akukho ukuqokelelwa yityhefu, enyibilikayo emanzini, efanelekileyo ekusetyenzisweni, engafumaneki kukuqina kwamanzi. I-Benzalkonium chloride 1227 inokusetyenziswa njenge-anti-mildew agent, i-antistatic agent, i-emulsifying
iarhente kunye nearhente yohlengahlengiso kumabala olukiweyo kunye nedayi. izinto index Inkangeleko yolwelo emthubi ukukhanya tyheli waxy Usetyenziso oluqinileyo: Njengoko i-nonoxidizing boicide, idosi ye-50-100mg / L iyathandwa; njengokususa udaka, i-200-300mg / L iyathandwa, iarhente efanelekileyo ye-antiifoaming kufuneka yongezwe le njongo. I-DDBAC /BKCinokusetyenziswa kunye nezinye i-fungicidal ezinje nge-isothiazolinones, glutaraldegyde, dithionitrile methane ye synergism, kodwa ayinakusetyenziswa kunye ne-chlorophenols. Ukuba ilindle livelile emva kokuphoswa kwale mveliso ekujikelezeni amanzi apholileyo, ilindle kufuneka lihluzwe okanye livuthelwe ngexesha ukukhusela idiphozithi yabo ezantsi kwetanki lokuqokelela emva kokunyamalala komkhukula.
Egqithileyo ISODIUM LAURYL OKANYE I-70% (SLES)
Okulandelayo: I-DICHLOROMETHANE / IMETHYLENE CHLORIDE
UDodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlori
I-DICHLOROMETHANE / IMETHYLENE CHLORIDE
I-ETHYL (ETHOXYMETHYLENE) ICYANOACETATE ICAS #: 94-05-3